Dr. Axmed Xuseen Ciise Oo Weeraray Mulkiilaha Jaamacada Abaarso Oo ah nin Maraykan ah | Somaliland.Org
July 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- siyaasiga Axmed Xuseen Ciise, ayaa doraad xafiiskiisa ku weeraray isla markaana u hanjabay Mulkiilaha dugsiga sare iyo Jaamacadda Abaarso TECH Mr. Jonnaton Star oo u dhashay dalka Maraykanka, siday shabakada wararka ee Somaliland.Org u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ahi.
Axmed Xuseen Ciise oo wakiil u ahaa mulkiilaha, ayaa la sheegayaa in uu wado qorshe uu doonayo inuu meesha kaga saaro mulkiilaha dugsigaasi Jonnaton Star oo dhaqaale badani ka galay hirgelintii dugsigan waxaana la sheegay in uu ninkaasi u hanjabay isla markaana ugu baaqay inuu dalka ka baxo.
Sida wararkaasi sheegayan, Jonnaton Star ayaa xukuumadda Somaliland gaadhsiiyay dacwad ka dhan ah siyaasiga Axmed Xuseen Ciise oo uu sheegay inuu hadiday isla markaana uu cabsi geliyay si uu ugala wareego Jaamacaddan oo uu xusay inay lacag badani ka gashay. Sidoo kale, Mulkiilaha iskuulkan oo ah maamulaha, ayaa waxa la xaqiijinayaa inuu hay’adaha amaanka ee Somaliland ka dalbaday inay ammaankiisa la socdaan, maadaama oo uu Dr. Axmed Xuseen Ciise cago-juglayn ku hayo.
Dr. Axmed Xuseen Ciise oo ah nin wadanka Maraykanka deganaa muddo dheer waxna ku soo bartay isla markaana qaba gabadh dublamaasiyad Maraykan ah ayay arrintani ku noqon karaysaa mid yeelata saameyn laxaad leh.
Previous PostMaxay Qabteen Wasaaradaha Duulista Hawada Iyo Maaliyaddu Sadexdii bilood ee la soo dhaafay?Next PostUDUB oo Guddi u saaray sidii waan-waan looga dhex abuuri lahaa Garabada ku hirdamaya Xisbiga UCID	Blog